Chiziviso chitsva cheApple Penzura chinosimbisa kumhanya kwayo uye kunyatsoita | IPhone nhau
Iyo Apple Penzura ndiyo yakakwana chishongedzo che iPad 10.5 uye 12.9 inches. Mune yakakosha Muvhuro wadarika isu takakwanisa kuona kugona kukuru uko ipenzura yakangwara yeApple Apple inogona kuva nayo kana zviwanikwa zvese zvikashandiswa. Iko kugona kweApple Penzura ichavandudza muIOS 11, uyezve, mune yazvino beta isu tinogona kutoona kukosha kwekuti Apple yanga ichida kupa peni yayo. Kutevera maitiro emazuva ano, Apple yatanga shambadziro nyowani kusimbisa kumhanya kweApple Penzura, kuve nechokwadi chekuti haipo chikwata chero.
iOS 11 + Apple Penzura: chinoshamisa chiitiko
Iyo Apple Penzura ndiyo yakanakisa chishandiso iwe chaunowana kana iwe uchitsvaga zvakakwana zvakakwana. Nyora pasi mazano, penda mvuracolor, dhonza madhayagiramu, kusaina zvibvumirano, ita zvirevo mumaemail ako kana chero chaunoda. Iwe uchaona kuti zviri nyore kwazvo kubata asi hazvigoneke kuti uende.
Nemaminetsi gumi nemashanu chete ekuchaja, iyo Apple Penzura inogona kuve nekuzvimiririra kwe 30 minutos. Uye zvakare, tinokuyeuchidza kuti chishandiso chinogona kubhadhariswa neiyo iPad pachayo nekuda kwechibatanidzi cheMheni. Ikozvino kuvandudzwa kwakaitwa kuchishandiso uye kwakaziviswa panguva yechikuru kunoita kuti tione izvo chinyoreso cheApple chinogona kudikanwa paPads. Ikozvino zvakanyatsojeka, nekukurumidza uye kunyange zvimwe zviito sekuonekwa kwekuda kwePenzura zvakagadziridzwa. Izvi ndezvekuti pakudhirowa, semuenzaniso, chinyoreso chaizoshanda chakafanana neicho chemazimbe icho kana chakamonyororwa chaigona kuvhara nzvimbo yekudhirowa yakawanda.
In the itsva apple ad iwe unogona kuona maratidziro avanoratidza kukosha kwemarara mune urwu rudzi rwezvishongedzo. Iyo Apple Penzura inokurumidza uye inoshanda zvakakwana neIOS 11. MuBeta yeiyo sisitimu yekushandisa tinogona kuona maitiro aungaite maratidziro nechinyoreso kwese kwese nenzira yakapusa. Uye zvakare, mabasa matsva senge ekugadzirisa mifananidzo zvakananga kubva kuemail app anokutendera iwe kuwedzera mushandisi kugadzirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple inosimbisa Apple Penzura nhau nechiziviso chitsva